Ukuhlanzwa Komkhiqizo Wobuhle obuhlanzekile nge-Ultrasonics - Hielscher Ultrasound Technology
Imvelo, izithako ze-organic (i-INCIs) ehlanganiswe nokusebenza okuphezulu kanye ne-bioavailability yizici zemikhiqizo emisha yokuhlanza ehlanzekile. I-Ultrasonication isetshenziswa njengecebo elisebenzayo futhi elinokwethenjelwa lokuxuba, ukuxuba, ukusabalalisa, i-nano-emulsify ne-nano-encapsrate izithako zezimonyo.
Kungani Kufanele Usebenzise i-Ultrasonication yemikhiqizo Yakho Yobuhle Okuhlanzekile?
Ukuxuba, ukuxubanisa, ukusabalalisa, izithako ezithuthukisa kanye nokufaka ama-molecule we-bioactive kuyizinqubo eziyinhloko zokwenziwa kwezimonyo, ukunakekelwa kwesikhumba, ubuhle kanye nemikhiqizo yendawo yonke. Ukusebenza okuthembekile, okusebenzayo nokunobungqabavu kwalezi zinqubo ezibalulekile kubalulekile ukuthola imikhiqizo esezingeni eliphakeme yezimonyo ezinemiphumela ephakeme, i-potency kanye nokusebenza kahle komkhiqizo wokugcina. Izithako zanamuhla zobuchwepheshe obuphakeme ziyizinto ezikhiqizwe kakhulu, ezidinga ukufakwa okuyisisekelo emkhiqizweni wokugcina ukuze uthole imiphumela oyifunayo.
Sonication – Isikhala Esibanzi Sezicelo
I-Sonication iyindlela ephumelela kakhulu futhi ethembekile ye-homogenizing liquid-liquid and solid-liquid ukumiswa. Ukuhlanganisa ama-molecule ku-nano-sized carriers (isib. Ama-liposomes, ama-niosomes, ama-nanoparticles aqinile-lipid, abathwali be-lipid be-nanostructured, ama-micelles njll) kungenye indlela ebalulekile yokusebenza kwe-ultrasonics ephezulu.
I-Ultrasonication ingafakwa kwizinyathelo eziningi ekukhiqizeni imikhiqizo ehlanzekile, yemvelo, yokuhlobisa umzimba, ubuhle nemikhiqizo yokunakekelwa kwesikhumba futhi ithuthukise ukusebenza kahle kokuxuba nokufaka isicelo. Njengoba abaxube be-ultrasonic bahlinzeka ngokuxuba okukhulu kanye ne-homogenization, ukusetshenziswa kwezithasiselo zamakhemikhali ezivame ukungezwa ukufezekisa ukuzinza okuhlala isikhathi eside nokuphila eshalofini kungancishiswa noma kugwenywe ngokuphelele.
I-Sonication ikunikeza ithuba lokuncintisana ngokukhiqiza imiphumela ephakeme kunqubo esheshayo nephumelelayo eholela ukumiswa komfaniswano, okungajwayelekile. Lokhu kuthinta ukuqina komkhiqizo, impilo yamashalofu kanye nokusebenzelana kwezinto eziphilayo ngamabibi ngokufanele.
Ukuxuba & ukuxuba
emulsification & I-Nano-Emulsification
Ukubalwa kwama-Molecule (liposomes, niosomes)
Ukukhishwa kwama-molecule we-biioactive kusuka ku-botanicals
Sonication – Ukwelashwa Okumsulwa Kwemishini
I-Ultrasonization iyindlela yokwelashwa emnene, engenawo amafutha, engazonakalisi izinto ezingavuthiwe ngokushisa. Izithako eziningi ezinjenge-lipids, ama-molecule we-bioactive noma uwoyela obalulekile awutholi ukushisa futhi uyazuza kakhulu kakhulu ngokulungiswa kokushisa okuphansi. Amadivayisi we-Hielscher Ultrasonics angalawuleka kahle, angaguqulwa kalula futhi angaqashwa futhi asebenze ngokulawulwa kwesiphequluli se-browser emote. Isoftware ehlakaniphile ilawula ngokuzenzakalelayo amapharamitha wokusebenza ekhadini le-SD-khadi elakhelwe ngaphakathi. Lezi zici zenza inqubo nenqubo yokumiswa kwekhwalithi kanye nokuqaliswa Kwezinto Ezihle Zokukhiqiza (GMP).
I-Ultrasonic Emulsization nge UP200St
Isimiso esisebenzayo se-Sonication
Njengoba i-sonication iyindlela yokwelapha eyenziwe ngomshini, awekho amakhemikhali ongezelayo, angaphazamisa ifilosofi yezimonyo ezihlanzekile. Izicelo ze-Ultrasonic ezinjengokuxuba, ukuxuba, ukumisa, ukubopha nokukhishwa kususelwa kunqubo yokusebenza ye-acoustic cavitation.
Amagagasi anamandla aphezulu we-ultrasonic ahlanganiswa nge-processor yohlobo lwe-probe-hlobo ku-slurry. Amagagasi e-Ultra anamandla amakhulu ahamba emgudwini uketshezi enza ukuthi kuguqulwe umjikelezo we-high-pressure / low-pressure, okuholela ekwenzekeni kwe-acoustic cavitation. Ukuhamba kwe-acoustic noma i-ultrasonic kuholela endaweni yakwamazinga okushisa ngokweqile, izingcindezi, amazinga okushisa / okupholisa, umehluko wokucindezela kanye namandla aphezulu e-shear phakathi nendawo. Lapho ama-bubble we-cavitation efaka ebusweni bezinhlayiya noma amaconsi, ama-micro-jets kanye nokushayisana kwe-inclarticlular kukhiqiza imiphumela efana nokugobhoza komhlaba, ukuguguleka kwenhlabathi, ukuqhekeka kwezinhlayiyana, ukuqothuka kwe-sonoporation kanye ne-Droplet kanye nokuphazamiseka kweseli. Ngaphezu kwalokho, ukuvezwa kwama-bubble we-cavitation kwimidiya ye-liquid kudala ukuxubana kwama-macro-turtle kanye nokuxubana okuncane. I-Ultrasonic irradiation imele indlela ephumelelayo yokuthuthukisa izinqubo zokudlulisa ngobuningi, ngoba i-sonication iphumela emgudwini kanye nezinqubo zalo ezihlobene njengokuhamba kwe-micros-by Jets liquid, compression and decompression in the material with a future following Droplets, and heating high and baridiing amanani.
I-Probe-Type ultrasonicators ingakhiqiza ama-amplopes aphezulu kakhulu, okudingekayo ukukhiqiza i-capacitor enomthelela. I-Hielscher Ultrasonic yenza ama-processor aphakeme kakhulu we-ultrasonic, angadala kalula ama-amplopes we-200µm ekusebenzeni okuqhubekayo kwe-24/7. Ngezikhuliso eziphakeme ngisho nangokwengeziwe, iHielscher inikeza ama-sonotrodes aphakeme kakhulu wesibalo.
Izithinta ezisebenza nge-Pressurizable ultrasonic kanye namaseli okugeleza zisetshenziselwa ukwenza umfutho we-cavitation. Ngokucindezela okukhulayo, i-cavitation kanye ne-cavitational shear Force iba yingozi kakhulu futhi ithuthukise ngaleyo ndlela imiphumela ye-ultrasonic.
Izinzuzo ze-Ultrasonic Blending and Emulsation
Ukukhiqizwa kwezingxube ezingejwayelekile, ukusakazwa, ama-emulsions, nama-nano-emulsion yi-sonication kutholile isifiso sabakhethi bezimonyo ngenxa yokusebenza kahle kwamandla, isidingo samathuluzi wokuxubha aphansi, ukukhohlisa uhlelo okulula futhi okubaluleke kakhulu, izindleko zalo zokukhiqiza eziphansi. Ukuxubana kwe-Ultrasonic, ukuxubanisa kanye ne-emulsization kukhulisa ukuguquguquka kokukhetha izakhiwo ezinesimo sezinto ezinhlobonhlobo kanye nengaphakathi le-emulsions. (cf. Marzuki et al. 2019)
I-UIP4000hdT, i-4kW enamandla e-ultrasonicator, esetshenziselwa ukusabalalisa okuphakathi kokunye kanye nezinhlelo zokusebenza ze-emulsification ekwakhiweni kwemikhiqizo yezimonyo.
Izinto Zobukhulu beMolecule
Ama-molecule we-submicron- ne-nano-size akhombisa isilinganiso esikhuphuke kakhulu sokuvumeleka kwe-transdermal. Ngenkathi ama-molekyuli amakhulu ehleli phezulu kwesikhumba futhi engakwazi ukungena esikhunjeni ngenxa yobukhulu bawo, ama-molecule amancane ayakwazi ukudlula kwi-epidermis.
Lokhu kusho ukuthi izinhlanganisela ze-bioactive zithuthelwa ezingxenyeni ezijulile ze-dermal, lapho zingakwazi ukufeza khona "umsebenzi" wazo ngokunondla noma ukulungisa isikhumba.
Isibonelo esivelele sokuhambisana nosayizi wamangqamuzana yi-hyaluronic acid, molecule ende. Uma i-hyaluronic acid inesisindo esikhulu se-molcular, ayinakudlula emgoqweni wesikhumba futhi ihlale njengefilimu kusendlalelo sayo sangaphandle. I-hyaluronic acid ephansi ngakolunye uhlangothi yathuthelwa ezingxenyeni ezijulile zesikhumba, lapho ifaka khona imiphumela yayo yomswakama.
Esinye isibonelo sokuhambisana nosayizi wezinhlayiya yi-titanium dioxide ne-zinc oxide. Kokubili kusetshenziswa njengezithako ezisebenzayo emikhiqizweni yemvelo yesikrini selanga (isb. Ama-lotion, ama-moisturizer, amahlumela). Ubukhulu obuncane obufana nezinhlayiyana kubalulekile ukugwema ukufinca ama-pores esikhumba nokuvikela ukugqashuka lapho. Ngaphezu kwalokho, ngezinhlayiya ezincane umphumela omhlophe nokukhazimulayo kwezikrini zelanga kuyancishiswa noma kugwenywe.
Ukungena Kwesikhumba Okuthuthukisiwe
Okokuqinisa ukungena kwesikhumba kwamakhemikhali kufaka phakathi izinto ezinjenge-l-α-lecithin, i-urea, okunamafutha, i-ethanol ne-glycols.
Izithuthukisi zesikhumba zokungena kwe-Vesicular zifaka ama-vesicular carriers afana ne-liposomes ne-niosomes. Izithwali ze-Vesicular ziyizinhlelo ezinamandla zokulethwa kwama-molekyuli asebenzayo. Ngenxa yokwakheka kwabo, banikeza inzuzo yokuthwala ama-hydrophilic kanye nama-molecule we-lipophilic. Ama-molekyuli e-Hydrophilic afakelwe umgogodla wamanzi, futhi amangqamuzana e-lipophilic afakwa kulwelwesi lwe-lipid elizungeze umgogodla wamanzi. Njengoba izindonga ze-vesicle zakhiwe ngama-bilosers we-phospholipid we-liposomes kanye ne-syntheticants yokwenza ama-niosomes ngokulandelana, ama-vesicles awancibilikiswa amanzi futhi ngalokho anezinto ezimbili ezihambisanayo.
Funda kabanzi mayelana nama-liposomes akhiqizwa yi-lipasonic!
Izithuthukisi zesikhumba zokungena kwe-Enzymatic zifaka ama-enzyme afana ne-HMGCoA reductase kanye ne-acetyl CoA carboxylase, evimbela ama-enzyme asemqoka we-epermermal lipid synthesis futhi iguqule isilinganiso esibucayi se-molar se-key stratum corneum lipids.
I-Urea, eyaziwa nangokuthi i-carbamide, isetshenziselwa ukukhulisa ukumuncwa kwezinye izithako zokugcoba ezisebenzayo njengoba ikhulisa ukutholakala kwesikhumba.
I-Ultrasonically ithuthukise i-Bioavailability of Aclication ekunakekelweni kwesikhumba
I-bioavailability ichazwa njengezinga lokungena lokungena kwekhompiyutha elisebenzayo ukufinyelela indawo yalo yokusebenza. Izinga elibizwa nge-flux noma inani lokungena okusebenzayo ngokuhamba kwesikhathi kunqunywa kuma-micrograms / cm2/ ihora. Izithako ezisebenzayo emikhiqizweni yezimonyo, indawo okuqondiswa kuyo yesithako imvamisa yi-epidermis engezansi. Ukukhishwa kuyizinto ezinjenge-zinc oxide noma i-titanium dioxide, izithako ezivamile emalangeni elangeni nezifafaza, ngoba lezi zinto zinendawo yazo yokusebenza ebusweni besikhumba, lapho izinhlayiya zingabeka khona amandla abo okuthola ubuningi be-UV.
Ukuqina kwe-bioavailability kwezithako ezisebenzayo kuthonywa kakhulu izinhlobo zezinto zokuhlobisa ezisetshenzisiwe. Ukwakheka okuvamile ebuhleni nasemikhiqizweni yokunakekela komuntu kungama-emulsions we-oyili-amanzi (i-O / W), ama-emulsions wamanzi-nge-oli (W / O), emulsions wamanzi-emanzini-emanzini (i-W / O / W) , ama-emulsions we-polyol-in-oil kanye nama-hydrogels. (Amapholomu asetshenziswa ekwakhekeni kwezimonyo zemvelo yi-sorbitol, i-mannitol, njll.).
I-Sonication Yokwandisa Ukuqina Kwekhumba
Ukutholakala kwesikhumba kanye nokuncipha kwalokho okuphathelene nokwenziwa kwezinto zokugcoba kanye nokwenziwa komkhathi kungakhushulwa ngokuthonya isithiyo sesikhumba noma ngokwandisa ukumelana kwamangqamuzana asebenzayo.
Ukuze wehlise isithiyo sesikhumba futhi uhambise ukuhambisa kwamamolekyuli ku-genermis engezansi, izinto ezinjenge-sol sol, phospholipids kanye nama-vesicles we-survivant enziwe kusuka kuma-phospholipids kanye nama-exfoliants angathuthukisa ukungena kwamakhompiyutha abe yizendlalelo zesikhumba ezijulile.
Ama-solvents asetshenzisiwe afaka i-dimethyl isosorbide, i-ethoxydiglycol, i-ethanol, ne-oleic acid. La ma-sol solar ahambisana kakhulu nezinqubo zokuxuba ze-ultrasonic, ukuxubanisa kanye ne-emulsification.
Ama-phospholipids aziwa kakhulu ukuthuthukisa ukungena kwesikhumba kuwo womabili ama-molekyuli e-oyili namanzi. Ama-phospholipids asetshenziswa kakhulu yi-lecithin, i-lecithin ye-hydrogenated, i-lyonsocithin, ne-tocopheryl phosphate. Bayazuza ekusebenzeni kwe-ultrasonic njengoba i-sonication isabalalisa ama-phospholipids ngokulinganayo ekumisweni.
Ama-vesicles we-Survivant: Ama-Survivants angakha ama-multilamellar nama-unilamellar vesicles ane-acatives. Ama-liposomes nama-nanoparticles aqinile e-lipid yizibonelo ezivelele zokungena kwesikhumba okuhambisa imithambo ye-bioactive ezindaweni eziqondisiwe. I-Ultrasonication iyindlela ephumelela kakhulu futhi ephumelelayo yokukhiqiza ama-liposomes, ama-nanoliposomes nama-nanoparticles ama-lipid aqinile (ama-SLN) ngomthwalo osebenzayo omningi, ukusebenza kahle kwe-encapsulation (% EE), ukuqina kanye ne-bioavailability.
Ama-exoticants amakhemikhali afaka i-lactic, i-glycolic, i-salicylic acid, ne-N-acetyl-glucosamine. Izikhonkwane ezisebenza ngomshini zifaka izinhlayiya ezinkulukazi ezivela kumalahle, amachibi kakhukhunathi noma ikofi ikhofi. Zonke lezi zinto zingahlakazeka kahle nge-ultrasonization.
I-solubility yezithako ezisebenzayo ezimotweni zokukhuphuka ingakhuphuka ngokufakwa ezindaweni eziyinkimbinkimbi, ukubethelwa, imicronic- / nano-emulsions kanye ne-solubilisation ephumelelayo ekwakhiweni.
Ukufakwa ngaphakathi kufakwa kusetshenziswa i-cyclodextrins (njenge-alpha-, i-gamma-, i-hydroxypropyl beta-cyclodextrin) kutholwa yi-ultrasonication. I-cyclodextrin complexes ikhombisa indawo lapho izithako zezinto eziphilayo ezivalekile. Ukugoqa / ukushintshanisa kwenza izingxube ezisebenzayo zinganyibiliki namanzi bese zitholakala. Funda kabanzi mayelana nokufakwa kwe-infusion ye-ultrasonic!
I-Phytoglycogen iyi-nanoparticle esekwe ezitshalweni, (i-polysaccharide) nanoparticle ene-patity engakwazi ukugoqa izinhlobo eziningi zezinto zokuhlukumeza. I-Phytoglycogen octenyl supplement (PG-OS) iyi-amphiphilic carbohydrate nanoparticle, engeza yayo enikeza ama-emulsions ukuqina okuphezulu kwe-lipid oxidative. I-Ultrasonic emulsation ithuthukisa isizukulwane sama-homogenible, i-phytoglycogen emulsions ezinzile.
Ama-submicron- kanye nama-nanoemulsions asetshenziswa njengezinhlelo zokulethwa ngemizuzu, ezenza ukuthi izingxube zinganyibiliki amanzi futhi zivume ukuhambisa izithako ezisebenzayo ziye endaweni okugxilwe kuyo. Ubungako obuncane bezinga lamaconsi kukhulisa ukuqina ngokusebenzisa isithintelo sesikhumba sibe izingqimba ezijulile zesikhumba.
Ama-emollients aphakeme kakhulu asetshenziswa kaningi ekwakhiweni kokuthambisa izithako ze-hydrophobic / insoluble njengoba zimbalwa izinto ezisebenzayo ezingeyona ipolar. Ezisetshenziswa kaningi yilezi ezilandelayo ezinama-emollients amakhulu we-polar: isopropyl lauroyl sarcosinate, lauryl lactate, phenyl ethyl benzoate, dioctyl maleate, ne-dioctyl isosorbide. Izinhlobo ezahlukahlukene ze-sunscreens ziyaziwa ukuthi zingabongezeleli bokungena, futhi. Ukuhlanganiswa kwe-Ultrasonic nokuhlakazeka kuqinisekisa ingxube engahambi kahle yama-emollients we-polar nezithako ezisebenzayo.
Izingxube eziphezulu ze-Ultrasonic ezixubile zemikhiqizo yobuhle obuhlanzekile
Njengendlela yokwelapha yokuxuba imishini, i-sonication engasetshenziselwa ukwenziwa kwazo zonke izinhlobo zemikhiqizo yezemvelo eqinisekisiwe. Izinhlelo ze-Hielscher Ultrasonics 'ziyimishini ethembekile esetshenziselwa ukwenziwa kwezimonyo ezisezingeni eliphakeme kanye nezokwelapha ukwakha amakhompiyutha we-nano-emulsified kanye ne-liposomal encapsulated bioactive anesilinganiso esiphakeme sokufaka kanye ne-biocompatibility. Ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ayo, abakwaHielscher bahlinzeka ngama-ultrasonicators avela ku-compact hand-hand lab homogenizer ehlanganisiwe kanye nama-bench-top ultrasonicators ezinhlelweni ze-ultrasonic zezimboni ngokugcwele zokukhiqizwa kwamanani aphezulu wezinto zokuhlobisa. Izinqubo zokuqamba ze-Ultrasonic zezimonyo nama-cosmeceuticals zingaqhutshwa njenge-batch noma njengenqubo eqhubekayo emugqeni kusetshenziswa i-ultrasonic flow-ngokusebenzisa reactionor. Uhla olubanzi lwe-sonotrodes (i-phenes) nemikhumbi ye-reactor iyatholakala ukuqinisekisa ukusethwa okulungile komkhiqizo wakho we-liposome. Ukuba namandla kwemishini yokusebenza kwe-Hielscher sika-Hielscher kuvumela ukusebenza kwe-24/7 ngaphansi komsebenzi osindayo ezindaweni ezifunwayo futhi kuqinisekiswe umjikelezo wokuphila omshini omude.
Ukulawulwa okuqondile kwawo wonke amapharamitha wenqubo ebalulekile anjenge-amplitude, ingcindezi, izinga lokushisa nesikhathi se-sonication kwenza inqubo ye-ultrasonic ithembeke futhi izalwe kabusha. I-Hielscher Ultrasonics iyazi ngokubaluleka kwekhwalithi ephezulu yomkhiqizo futhi isekela abakhiqizi bezimonyo ukufeza inqubo yokuma kanye ne-GMP (Izenzo Ezinhle Zokukhiqiza) nge-software ekhaliphile nokuqoshwa kwedatha ezenzakalelayo. Ama-homogenizer ethu edijithali arekhoda ngokuzenzakalelayo wonke amapharamitha enqubo we-ultrasonic ekhadini le-SD-khadi elakhelwe ngaphakathi. Izithombisi zokuthinta kwedijithali kanye nokulawulwa kude kwesiphequluli kuvumela inqubo eqhubekayo yokuqapha futhi inike amandla ukulungisa amapharamitha wenqubo ngokunembile noma nini lapho kudingeka. Lokhu kusiza ukuqapha kwenqubo kanye nokulawulwa kwekhwalithi kakhulu.
Yini Imikhiqizo Yobuhle Ehlanzekile?
Izimonyo zobuhle obuhlanzekile yimikhiqizo yobuhle, eyenziwe ngezithako ezingezona ezinobuthi, ezenzeka ngokwemvelo. Ngenkathi i-organic noma i-cosmetic yemvelo ingeyona igama elichaziwe futhi elivikelwe ngokufanayo, izimonyo zemvelo zigxila ekusetshenzisweni kwezinto zemvelo ezingavuthiwe. Izinto ezingaba yingozi (isib. I-endocrine disruptors) azifakwa emikhiqizweni ehlanzekile yezimonyo, ngenkathi ukuhlanzeka kwezinto ezingavuthiwe ezisetshenzisiwe kuyisici sekhwalithi ebalulekile.
Ngokwencazelo eyaziwa kabanzi e-European Union, izimonyo zemvelo ziyimikhiqizo eyenziwe ngezinto zemvelo. Okwezokulondolozwa kanye nama-emulsifiers aqukethe imikhiqizo yemvelo yezimonyo, le ncazelo inwetshiwe ngokwengxenye. Izinto zemvelo zichazwa njengezinto zesitshalo, imvelaphi yezilwane noma yezimbiwa kanye nokuhlanganiswa kwazo nemikhiqizo yokusabela nenye. Ukuze kukhishwe futhi kuqhutshekwe kusetshenziswelwa kuphela izinqubo zomzimba / zemishini, njengokuphazamiseka kwemishini, ukomisa, ukuhlunga kanye nokukhishwa nge-sol solution kuvunyelwe. Ngaphezu kwalokho, izinqubo ze-enzymatic ne-microbiological zivunyelwe uma kusetshenziswa ama-enzymes wemvelo kuphela noma ama-microorganisms angenazakhi zofuzo (i-non-GMO).
Izimonyo ezi-organic nezemvelo zifaka ubuhle kanye nemikhiqizo yokunakekelwa kwesikhumba eyenziwe kuphela ngezinto zemvelo nezinto ezitholwayo noma izinto ezivunyelwe ukulondolozwa. Ubuhle bemvelo / i-organic kanye nemikhiqizo yokunakekela isikhumba ingaphansi kwemithetho efanayo yezimonyo.
Lezi zithako (ama-INCIs / Izithako Zokuhlobisa Zomhlaba wonke Zomhlaba) zivame ukusetshenziswa futhi zithandelwa izinto ezingavuthiwe ezisetshenziselwa ukwakheka kobuhle obuhlanzekile:
Izimbungulu: isigaba samanzi: i-aqua, amanzi afakwe njengamanzi we-rose njll; i-organic ethanol; i-glycerin yemifino njll.
Abasizi / abaqinisi / ama-emulsifiers: ama-lecithin, ama-phospholipids; ama-glucoside anjenge-lauryl glucoside, i-decyl glucoside, caprylyl / decyl glucoside, coco glucoside; cocamidopropyl betaine; utshwala be-cetearyl, njll.
Amafutha wesithwali / isigaba se-oyela: uwoyela nezinhlamvu ezinjengamafutha amnandi e-alimondi, uwoyela we-avocado, uwoyela we-walnut, uwoyela kakhukhunathi, uwoyela we-hemp, uwoyela wembewu sunlighter, i-castor oil, i-organ organ, i-broccoli yembewu yembewu, uwoyela wembewu emnyama, uwoyela we-carob, imbewu ye-baobab uwoyela, njll.
Ama-Butter and waxes: ibhotela le-shea, ibhotela lukakhukhunathi, ibhotela lomango, ibhotela le-cocoa, i-organic bee wax, njll.
Ukukhishwa kwe-botanical njengamanzi we-chamomile, ukukhishwa kwe-arnica imbali, ukukhishwa kwe-calendula, ukukhishwa kwe-burdock izimpande, amanzi we-rose, ukukhishwa kwembewu eyi-prime rose, i-nettle tincture, ukukhishwa kwe-papaya glycerol, njll.
Amafutha abalulekile emvelo anjenge-lavender, peppermint, isihlahla setiye, isarhip, i-mindhe (uwoyela obalulekile osetshenziswa emikhiqizweni yezemvelo yemvelo kumele akhishwe ezintweni zemvelo ezihlanganisiwe, hhayi zenziwe ngokwezifiso)
Izithako ezisebenzayo yizinto ezenza imikhiqizo yezimonyo empeleni zisebenze, ie ibanikeza ukuthambisa, ukuvuselela & imiphumela yokulwa nokuguga. Izithako ezisebenzayo / ama-molecule e-bioactive afana ne-resveratrol, hyaluronic acid, urea, uvithamini C, CoQ10, izindonga, uvithamini E / alpha-tocopherol, amavithamini e-B, i-Ferulic acid, i-retinol & ama-retinoids, ama-peptides, i-titanium dioksidi, i-zinc oxide, amalahle ocushiwe, i-lactic acid yemvelo, i-pyrrolidone carboxylic acid, usawoti wamaminerali, i-D-panthenol, ukukhipha amagilebhisi, ukukhiqizwa kweqabunga lomnqumo, i-aloe vera, i-oligogalactomannans njll.
Izithako nezithako zamakha amakha ezisetshenziselwa izimonyo zemvelo kawoyela obaluleke kakhulu, uwoyela wemvelo nezinhlanganisela ezithile zephunga. Amafutha abalulekile avela ku-orange, i-lavender, i-peppermint, ulamula, i-sandalwood, i-jasmine, i-neroli, i-patchouli, i-rose, ne-ylang-ylang yizithako ezidumile zamakha kwimikhiqizo yezimonyo yemvelo.
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kuyindlela ephakeme kakhulu yokukhiqiza amafutha aphezulu asezingeni eliphakeme kusuka ku-botanicals. Funda kabanzi mayelana ne-hydrodistillation ye-ultrasonic yamafutha abalulekile!
Izithako Ejwayelekile Ezisebenzayo Emikhiqizweni Yemvelo Yemvelo
I-Panthenol yinto, eyenzeka emvelweni eyaziwa ngokuthi yi-pro-vithamini B5, futhi isetshenziswa kwimikhiqizo yemikhiqizo yezimonyo njenge-ejenti ye-emollient ne-moisturizing. Ezakhiweni zokunakekelwa kwezinwele zongezwa njenge-hum humantant, emollient, glossifier, detangler kanye ne-agent yokuthambisa. I-Panthenol itholakala njengefomu le-D, noma njengengxube yezinhlanga, i-DL-panthenol. I-D-panthenol iyifomu elithandekayo, ngoba yi-D-panthenol kuphela eguqulwa ibe yiVitamin B5.
polyphenols njenge-resveratrol, quercetin, ne-rutin zingama-antioxidants wemvelo anamandla, angakhishwa kuma-botanicals. Zisetshenziselwa izimonyo kanye ne-cosmeceuticals ukuvimbela ukusabela kwe-oxidative chain esikhunjeni somuntu futhi nokuxhaswa ngakho-ke impilo yezikhumba jikelele futhi kungavikela ezinye izifo zesikhumba kanye nokuguga ngaphambi kwesikhathi.
Ama-cosmetics wemvelo aqinisekisiwe
Asikho isilinganiso esisodwa sezitifiketi esivumelekile somhlaba wonke ngobuhle bendalo nemikhiqizo yezimonyo. Abenzi bezimonyo bangathola imikhiqizo yabo iqinisekiswe ngokuya ngamazinga ahlukile wesitifiketi, amukelwa emazweni athile noma ezifundeni ezithile.
Isitifiketi esivelele futhi esaziwa umhlaba wonke yi-COSMOS-standard (COSMetic Organic Standard) ehlukanisa phakathi kwezimonyo zemvelo (i-cosmos-yemvelo) kanye ne-organic cosmetics (iCosmos-organic) futhi ibeka izidingo ezifanele zokuthola isitifiketi. Umkhiqizo wokunakekelwa kwezimonyo yi-COSMOS ORGANIC eqinisekisiwe kuphela uma izitshalo ezingama-95% ubuncane bezithako zingama-organic kanti okungenani ama-20% wezithako eziphilayo akhona kwifomula ephelele (10% yemikhiqizo yokuhlanza).